Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Booland News » Poland waxay isu diyaarineysaa inay ku soo booddo waaxda dalxiiska
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Booland News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Poland waxay u weecanaysaa meel ku habboon kuwa socdaalka ah ee dhallinyarada ah ee aan awoodin inay la kulmaan socdaal aan karantiil lahayn ku dhawaad ​​laba sano.
Poland waa meel sanadka oo dhan la joogo oo bixisa khibrado kala duwan oo aan la qiyaasi karin iyo qiimo aan la jabin karin marka la barbar dhigo dhiggeeda Yurub.
Iyada oo la qorsheeyey in ka badan 62 mashruuc oo huteel oo 35 ah ayaa si rasmi ah loo furi doonaa 2021, Poland waxay mudnaan siinaysaa kor u qaadista kobcinta dalxiiska xilligii masiibada kadib.
Magaalooyinka Poland waxay si fiican isugu daraan meelaha magaalooyinka leh goobo cagaaran oo dabiici ah, mana jirto magaalo tan ka fiican Warsaw.
Iyada oo lagu dhawaaqay in nidaamka iftiinka taraafikada caalamiga ah lagu fududaynayo England oo leh hal liis cas oo laga bilaabo Oktoobar afaraad, fasaxyada Poland, oo ka mid ah meelaha ugu wanaagsan Yurub ee socotada dhallinyarada ah, ayaa dib u soo noqday.
Laga bilaabo 4ta Oktoobar, ku dhawaaqistu waxay ka dhigan tahay dadka ka soo noqonaya Poland kuma sii jiri doono karantiil hoteel, haddii waddanku ka baxo liiska cas. Imtixaannada PCR mar dambe looma baahnaan doono socdaalayaasha si buuxda loo tallaalay ee ku soo noqonaya England, iyo nidaamka imtixaanka cusub, dadka labada shaqo wada lahaa uma baahna inay qaataan imtixaanka ka hor bixitaanka ka hor inta aysan ka tegin waddan aan ku jirin liiska cas.
Laga soo bilaabo xeebta Baltic -ga ah ee xeebaha leh ee leh xeebaha bacaadka cad leh, sixirka UNESCO-kaymaha la ilaaliyo iyo buuraha Tatra titanic ilaa hodan magaalooyin leh taariikh, goobo cagaaran iyo dhaxal dhaqameed hodan ah, Poland waa meel sannadka oo dhan ah oo bixisa waayo-aragnimo kala duwan oo cajiib ah iyo qiime aan laga adkaan karin marka la barbar dhigo dhiggeeda Yurub. Arrimahan ayaa Poland ka dhigaya meesha ugu habboon ee loogu talagalay kuwa socotada ah ee dhallinyarada ah ee aan awoodin inay la kulmaan socdaal aan karantiil lahayn ku dhawaad ​​laba sano.
In ka badan 62 mashruuc oo huteel oo cusub ah ayaa la qorsheeyay iyo 35 oo si rasmi ah loo furi doono 2021, taasoo keenaysa 7,422 qol oo cusub Poland, waddanku wuxuu mudnaanta koowaad siinayaa sidii kor loogu qaadi lahaa kobaca dalxiiska ee xilligii masiibada kadib. Laga soo bilaabo dalxiiskii magaalooyinka ilaa miyiga, bishii Luulyo, UNESCO waxay ku dhawaaqday in Kaymaha Qadiimiga ah ee Filand iyo Fiinaalaha la siiyay Xaaladda Dhaxalka Adduunka. Kaymaha Qadiimiga ah ee Carparthians waxay ku baahsan yihiin wadamo dhowr ah, qaybta Polandna waa Beerta Qaranka Bieszczady ee kale ee adduunka.
Goobta Nasashada Magaalada ugu Wanaagsan ee Yurub ee Socotada Dhallinyarada ah
Ku quuso Krakow, caasimadda dhaqanka ee Poland
Krakow wuxuu u soo ifbaxayaa mid ka mid ah meelaha ugu jaban magaalooyinka Yurub, iyo sabab wanaagsan. Magaaladu waxay leedahay hiddaha dhaxalka adduunka, oo leh astaanta Old Town, Wawel Castle iyo degmada Kazimierz oo dhammaantood iska leh liiska UNESCO ee Dhaxalka Adduunka. Krakow sidoo kale waa Caasimaddii hore ee Dhaqanka ee Yurub, iyada oo in ka badan 100 xaflado iyo dhacdooyin dhaqameedyo caan ka ah adduunka ay sannad walba halkan ka dhacaan. Waxa kale oo aad ka heli doontaa rubuc ka mid ah dhammaan aruurinta farshaxanka madxafka ee magaalada. Sidii haddii abaalmarintan sharafta leh aysan ku filnayn inay ku sasabto, magaaladu sidoo kale waxay ahayd Caasimaddii Yurub ee Dhaqanka Gastronomic. Waxaad ka heli doontaa wadar ahaan 26 maqaayadood oo ku leh farqiga Michelin, iyo ku dhawaad ​​laba jibaar intii lagu maamuusay Gault & Millau. Laga soo bilaabo wax-soo-saar tayo sare leh ilaa hilib-yaqaanno caan ka ah adduunka, goobta cuntada ee Krakow waa hodan iyo kala duwan.